Horjooge Cali Dheere oo dhaawac culus ka soo gaaray howlgal ka dhacay Shabeellaha hoose | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Horjooge Cali Dheere oo dhaawac culus ka soo gaaray howlgal ka dhacay...
Wararka naga soo garaya gobolka Shabeelaha hoose ayaa sheegaya in dhaawac culus uu kasoo gaaray horjooge Cali Maxamuud Raage Cali dheere uu ku dhaawacmay howlgal ay ka sameyeen ciidamada xoogga dalka Deegaanka Shaam oo hoostaga Degmada Awdheegle ee Gobolka Shabeelaha Hoose .
Howlgalkaan oo ahaa mid qorsheysan ayaa dhacay 11-kii bishan ,ka si oo lagu bartilmaameydsanayay maleeshiyadda ka tirsan Al Shabaab oo ku sugna deegaanka Shaam oo u dhexeya Bariire iyo Awdheegle oo kawadda tirsan Shabeelaha Hoose.
Maleeshiyaad uu la socday Horjooge Cali Dheere ayaa waxaa lasheegay in ay uga dhinteen ku dhawad 17- maleeshiyaad ah oo lasocday.
Weerarka ayaa sidoo kale,waxaa Al-Shabaab uga dhaawacmaya 25-kale oo uu ku jiro Afhayeenkooda dhaawac ka soo gaaray,waxaana hadda dhaawaca Cali Dheere lagu hayaa deegaanka Kuntuwaareey ee Gobolka Shabeelaha hoose,sida ay saaraakiil ka tirsan Ciidamada Xoogga dalka u xaqiijiyeen Idaacada Codka Ciidamadda.
Ciidamada Xoogga dalka ayaa dhawaan maleeshiyadda Al-Shabaab ka saaray deegaanka Awdheegle oo mudo ay ku dhibaateynayeen dadka shacabka ah,waxaana hadda degmadaasi dib ugu soo labtay dadkii horay uga barakacay oo ay handadaada Al-Shabaab ku hayeen.
Previous articleXujeyda Soomaaliyeed oo bogadiyay Dowladda kaalinta ay ka qadatay tayeynta adeegyadda Xujeyda sanadkan
Next articleGen:- Odawaa oo sheegay in ay gacanta ku dhigeen qar ka mid ah Argagaxisada soo weerartay Awdheegle